Hadiyado aad u aad u lab ah oo si wanaagsan ugu xiraya xabsiga | Ragga Stylish
Sidee u maareysaa karantiil? Waa maalmo adag oo xiriir taabasho, dhunkasho, salaaxid la seego, haa, maxaad u oran weydaa: Galmada sidoo kale waa la seegay! Gaar ahaan haddii aad tahay qof kaligiis nool ama uusan wehel kuu xigin.
Si loo xaliyo xaaladdan, maqaalka maanta waxaan ku tusi doonnaa xulasho hadiyado lab kaas oo aad awoodi doontid inaad ku qaadatid maalmaha xabsiyada si kafiican. Waxay kala yihiin alaabta lagu ciyaaro ee kacsiga leh si gaar ah loogu talagalay iyaga iyo cidda aad ku raaxeysan karto khibrad aad u wanaagsan.
1 Hadiyadaha erotic ugu fiican ragga
1.1 Siigaysiga gariirka ee ragga
1.2 Siilka Naqshadaynta Siigada Lab
1.3 Hayso Maskaxda Ukunta
1.4 Mashiinka Kacsiga
Hadiyadaha erotic ugu fiican ragga
Haddii aad rabto inaad yareyso maalmahan karantiilnimada, waxba kama fiicna booqashada mid ka mid ah bogagga ugu caansan ee bogagga internetka ku ciyaaraan ee erotic: Suuqa Kala Duwan. Waana halkaan halka ay ku ballaadhan yihiin kooxda ragga taas oo aad ka heli doontid aalado galmo oo aad u casrisan oo xiiso leh. Halkan waxaan ku ogaanay iyaga!
Siigaysiga gariirka ee ragga
Mid ka mid ah hadiyadaha lab ee aad sameyn karto inta lagu jiro karantiilkan ayaa ah masturbator gacmeed taasi waxay kaa dhigi doontaa inaad ku raaxeysato khibrad la yaab leh. Way fududahay in la isticmaalo iyo, marka lagu daro, waxaad ku biyo shuban kartaa gudaha maxaa yeelay dhaqso ayey u nadiifisaa, wax ka yar 1 daqiiqo. Waad xakameyn kartaa xoojinta duugista adiga oo isticmaalaya badhannada banaanka. Daaweyn weyn!
Siilka Naqshadaynta Siigada Lab
Laakiin haddii aad rabto inaad ku raaxeysato khibrad macquul ah, wax ka fiican ma aha inaad doorato toy kale oo erotic ah oo ku habboon ragga ugu baahida badan. Waxaan tixraaceynaa siigaysiyaasha qaab siil kuu oggolaan doona ku raaxee dareenka wax-ka-gelinta. Waa isbeddelka ugu foosha xun ee ku dhaca ragga masturbayaasha ah tan iyo markii ay bixiso a khibrad dhab ah. Ku dar wax yar oo saliid ah, indhaha isku qabo oo ku raaxayso dareen yaab leh.
Hayso Maskaxda Ukunta
Badeecad kale oo kufiican raaxada labka waa Masturbator Egg oo ka tirsan astaanta Tenga, shirkad kacdoon ku sameysay qaybta raaxada dhow ee leh waxyaabaha maskaxda ka dhaca. Ukuntaan waxaa lagu sameeyay qalab aad u qaas ah oo bixiya a dareemid raaxo xad dhaaf ah. Waa hab cusub oo siigaysasho ah oo ragga dhexdiisa guul ka gaadha waana inaad adigu isku daydaa.
Waxaanan dhammaynaynaa dib-u-eegidgan hadiyadaha ugu xiisaha badan lab si aan kaaga warramo bamka si aad u nuugto guska kuu oggolaanaya inaad ku raaxaysato kacsi badan iyo, intaa dheer, way ku caawin doontaa kordhinta cabbirka ee xubintaada murugada badan. Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay helitaanka kacsiga wanaagsan iyo sidoo kale daahitaanka biyo baxa. Qaabka ay u isticmaasho waa mid aad u fudud maadaama aad kaliya guska galisay gudaha isla markaana tuujinayso bamka; Waxaad arki doontaa sida xubintu u kordhiso dhumuc ahaan iyo dherer ahaanba.
Sidaad arki karto, waxaa jira hadiyado badan oo lab ah oo aad sameyn karto si aad ugu raaxeysatid karantiil aad u macaan oo basbaas badan. Xullo alaabooyinka aadka u soo jiita dareenkaaga, ama, haddii aad doorbido, booqo websaydhka Kala Duwan si aad u hesho waxyaabo badan oo ku habboon oo ku habboon galmada ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Hadiyado aad u adag oo lab ah si ay si fiican ugu qaadaan xiritaanka